Boqortooyada Sucuudiga oo dhiseysa magaalo uusan sharciga Islaamka ka shaqeyneyn! | STN Somali
Home Caalamka Boqortooyada Sucuudiga oo dhiseysa magaalo uusan sharciga Islaamka ka shaqeyneyn!
Boqortooyada Dalka Sucuudiga ayaa qorsheyneysa dhismaha Magaalo ay ku baxeyso £400bilyan oo lacagta Ingiriiska ah taas oo uusan sharciga Islaamka ka shaqeyneyn una gaar ah dadka reer Galbeedka ah.
Magaalada waxaa laga dhisayaa Xeebta Badda cas,waxaana ay dowladda uga gol leedahay soo jiidashada dalxiisayaasha Reer galbeedka ah.
Waxaa ay qeyb ka tahay qorshaha Sucuudiga ee 2030ka oo lagu doonayo in Sucuudiga ka wareego ku tiirsanaanta dhaqaalaha shidaalka kuna wareego maalgashiga iyo dalxiiska.
Magaaladan waxaa ay kaliya gaar u tahay Reer Galbeedka,waxaa lagu cabi karaa Al Kolada, Haweenka ma asturanayaan cawradooda sida kuwa Sucuudiga oo kale,waxaa ay marti gelineysaa ciyaaraha waaweyn ee Caalamka.
Waxaa ay marti gelineysaa ciyaaraha ugu dhaqaalah badan Adduunka sida Feerka, ciyaar feer ah una dhaxeysa Anthony Joshua iyo Andy Ruiz Jnr ayaa sabtiga soo socda ka dhaceysa Riyaad,waxaa ku baxeysa £66Milyan oo Pound-ka Ingiriiska ah.
Magaaladan waxaa lagu magacaabayaa Niyuum,waxaa laga dhisayaa Gobolka Tabuuk ee Waqooyi Galbeed Sucuudiga Carabiya,waxaana ay saarnaan doontaa Badda Cas, gaar ahaanna sohdinta uu Sucuudiga la wadaago dalalka Masar iyo Joordan.
Aragtida dhismaha Mashruuca Magaaladan waxaa laba sano ka hor hindisay Maxamed Bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha Sucuudiga ahna wiilka uu dhalay Boqorka hadda talada Sucuudiga haya ee Boqor Salmaan.
Magaalada Niyuum waxaa ay u shaqeyn doontaa si ka madaxbanaan Sucuudiga intiisa kale waxaa xorriyad dheeraad ah la siinayaa Haweenka, taageerayaasha Ciyaaraha iyo shaqaalaha Reer Galbeedka, kamana shaqeynayo sharciga Islaamka oo hadda ah Dastuurka Dalka Sucuudiga.
Previous articleWeerar Lagu Qaaday Gaari Bas ah iyo Al-Shabaab oo Sheegatay
Next articleQAABAB AANAD FILAYN OO AAD ISKAGA ILAALIN KARTO HARGABKA!